DOWNLOAD UKMIL ဘလက်ဘန်းခဲ့ကြတယ် S2 အထုပ် FSX & P3D - Rikoooo
UKMIL ဘလက်ဘန်းခဲ့ကြတယ် S2 အထုပ် FSX & P3D ဗားရှင်း 2.1
Size ကို 181 ကို MB
downloads 31 858
Author: Serge Luzin အားဖြင့် Philippe Wallaert, အသံအားဖြင့် UKMIL, FSX / P3D update ကို http://www.ukmil.org.uk
jour le 14 / 12 / 2017 à Mise: Nouvelle ဗားရှင်း 2.1, သဟဇာတ Prepar3D v4, GPWS, panel ကို au format နဲ့ 2-16, nouveaux effets, nouveaux သား,9nouveaux repaints, Model က de vol mise à jour ပေါင်းအသေးစိတ်က de le dans 6d fichier readme ။
animations တွေကိုများစွာ, အဆင်းလှသောကို virtual cockpit နဲ့တစ်ဒါဇင် repaints အပါအဝင်အပြီးအစီး pack ကို။ ဆိုက်မှစံပြ / လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှပယ်ယူပါ။ အဆိုပါလက်စွဲ site ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည် UKMIL.
ဒီ add-on အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူရဲကောင်းများ (H4H) တွေအတွက်အကူအညီထောကျပံ့ဖို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့စက်တင်ဘာလ 1 ကတည်းကဒဏ်ရာရရှိသည်ဗြိတိသျှစစ်မှုထမ်းနှင့်အမျိုးသမီးကိုကူညီ 2007 အောက်တိုဘာလ 11 အပေါ်စတင်ဗြိတိသျှမေတ္တာ, 2001
သင်ဤအဖွဲ့အစည်းကိုမှလှူဒါန်းချင်ပါတယ်လျှင်အပေါ်က link ကိုနှိပ်ပါ:
အဆိုပါဘလက်ဘန်းခဲ့ကြတယ်နှောင်းပိုင်း 1950s အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံကဒီဇိုင်းတစ်ခုတိုက်လေယာဉ်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာဘုတ်အဖွဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်သူကသုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျန်ရစ်နှင့် 200 ကော်ပီအကြောင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသော, နှင့်၎င်း၏မှဿုံသင့်လျော်ဖြစ်သက်သေပြ အနိမ့်အမြင့်မှာတိုက်ခိုက်မှု၏မစ်ရှင်.
UKMIL ဘလက်ဘန်းခဲ့ကြတယ် S2 အထုပ် FSX & P3D ဗားရှင်း 2.1 ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 41 662
Gmax Dassault Mirage F1 Package ကို FSX & P3D
Downloads: 50 153
UKMIL Harrier Package ကို FSX & P3D